Ọ dị mfe ịhazi 2.4611 nickel-chromium-molybdenum alloy? - Akụkọ ụlọ ọrụ-Hunan Allianz Metal Products Co., Ltd.
2.4611 alloy dị elu bụ elu-okpomọkụ alloy nke 760 ℃800MPa ọkwa elu-okpomọkụ ihe. Ịtụnye alloy okpomọkụ dị elu na-ezo aka n'ụdị alloy okpomọkụ dị elu nke nwere ike ịmepụta ma ọ bụ nwee ike ịmepụta naanị site na usoro nkedo. Isi njirimara ya bụ:
1. Ọ nwere ọtụtụ ihe mejupụtara. Ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa iburu n'uche ọrụ nhazi nhazi ya, nhazi nke alloy nwere ike ilekwasị anya n'ịkwalite arụmọrụ ya. Dịka ọmụmaatụ, maka superalloys dabeere na nickel, ọdịnaya nke γ' nwere ike gbanwee ka ọ bụrụ 60% ma ọ bụ karịa site n'ịgbanwe ihe mejupụtara ya, nke mere na alloy ahụ ka nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ dị mma na okpomọkụ dị elu dị ka 85% nke ebe mgbaze. alloy.
2. O nwere oghere ngwa sara mbara. N'ihi uru pụrụ iche nke usoro nkedo ahụ, ọ ga-ekwe omume ịmepụta na imepụta ihe nkedo nso-net ma ọ bụ enweghị oke okpomọkụ alloy ihe nkedo nwere ihe mgbagwoju anya na ihe dị mgbagwoju anya na-adabere na mkpa nke akụkụ ahụ.
Dị ka okpomọkụ ọrụ nke ihe nkedo alloy si dị, enwere ike kewaa ya n'ụdị atọ ndị a:
Pịnye 1: Ihe nkedo kristal nhata ejiri na -253～650℃. Alloys ndị a nwere ezigbo ihe zuru oke na oke okpomọkụ, ha nwere ike ịnọgide na-enwe ike na plasticity na obere okpomọkụ na-enweghị ibelata. Dịka ọmụmaatụ, ndị Monel K500, nke a na-eji na igwe ikuku na ikuku ikuku, nwere ike ike nke 1000 MPa, ike mkpụrụ nke 850 MPa, na plasticity tensile nke 15% na 650 ° C; ndụ ntachi obi ya n'okpuru nrụgide na 650 ° C na 620 MPa bụ awa 200. A na-eji ya na-emepụta casings diffuser na igwe ikuku na akụkụ dị iche iche dị mgbagwoju anya maka nfuli n'ime igwe ikuku.
Pịnye 2: Igwe ihe nkedo kristal nhata ejiri na 650～950℃. Alloys ndị a nwere akụrụngwa akụrụngwa dị elu yana nguzogide corrosion thermal na oke okpomọkụ. Dịka ọmụmaatụ, K419 alloy, na 950 ° C, ike nkwụsị dị elu karịa 700MPa, na ductility nkwụsị dị ukwuu karịa 6%; na 950 Celsius, oke ike ntachi obi maka awa 200 karịrị 230MPa. Ụdị alloy a kwesịrị ekwesị maka ojiji dị ka igwe ikuku turbine, vanes na-eduzi na nkedo.
Pịnye 3: kristal kọlụm siri ike na-eduzi na otu kristal superalloys ejiri na 950 ~ 1100 ℃ nwere arụmọrụ zuru oke yana nguzogide corrosion okpomọkụ na oke okpomọkụ a. Dịka ọmụmaatụ, DD402 otu kristal alloy nwere ndụ ịdịte aka karịa 100 awa n'okpuru nrụgide nke 1100°C na 130MPa. Nke a bụ ihe eji eme ihe na-ekpo ọkụ nke turbine nke okpomọkụ nke ụlọ, nke kwesịrị ekwesị maka ịmepụta ikuku turbine nke mbụ nke engine na-arụ ọrụ dị elu.
Site na mmụba na-aga n'ihu nke teknụzụ nkedo nkenke, usoro pụrụ iche ọhụrụ na-apụtakwa. Nkà na ụzụ nkedo nke ọma, nkà na ụzụ siri ike ntụziaka, teknụzụ CA nke akụkụ dị mgbagwoju anya nke nwere mgbidi dị mgbagwoju anya, wdg emewo ka ọkwa nke nkedo dị elu na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na njedebe nke ngwa ahụ nọgidere na-abawanye.